Energia farxad ah oo la tixgelinayo iibinta PV ama kuleylka? Nala soo xiriir
Home > tamarta la cusboonaysiin karo > Solar PV iyo Solar Thermal
Ku rakibidda albaabada PV-ka ee gurigaaga ayaa kuu oggolaan doona inaad ku dalbato Taraafiga Tijaabada ee Dowladda iyo inaad ku dhaqaaleyso biilasha tamartaada. Korontada aad dhaliso waxaa loo isticmaalaa hantidaada markaad u baahato. Haddii aadan isticmaalin dhamaan korontada aad dhalinayso ama koronto soo saari karto markaad guriga joogin, waxaa lagaa iibin doonaa kharashka. Weli waad awoodi kartaa inaad isticmaashid koronto marka aad u baahan tahay.
Inkastoo Solar u baahan yahay iftiin wali waxay ka shaqeysaa xaalado daruuro leh, sidaa daraadeed waa habboonaanta jawiga UK !!
Kaydinta batroolku waa halkaan - Tamarta shidaalku waxay awood u leedahay inay siiso iyo dib-u-qabasho ku-habboonaato hal-abuurka PV Solar Installations oo ah unug casri ah, oo ah badeeco cusub oo abuuri doonta nidaamyada kaydka tamarta oo sahlan iyo qiimo-wax-ku-ool ah.
Iyada oo Taraaficda Taraafiga ah oo si aad ah loo yareeyay Solar PV iyo qiimaha korontada laga yaabo in ay kor u kici karaan, kuwa iskoodhada ah ee keli ah ayaa keligood waxtar u leh baahida loo qabo is-qaadsiin. Qiyaasta is-is-dhaafsiinta ee is-rogida shabakada waa 20 oo keliya, taas oo micnaheedu yahay in 80% of your electricity ayaa dib loogu celiyo shabaqa. Sidaa darteed, macaamiil ahaan, waxaad u maleyneysaa in aad dib uga soo iibsanayso shabakadda ilaa 80% ee korontada aad dhoofisay.
Iyada oo saqafyada qorraxda ee saqafkaaga ku yaala saqafkaaga waxaad awoodi doontaa inaad dhaliso biyo kulul sanadka oo idil oo kaliya ayaa runtii u baahan doona inaad ku wareegto kuleyliyahaaga bartamaha jiilaalka. Maxaa badanaa waxaad awoodi doontaa inaad dalbato lacag-bixinno kulul oo dib-u-cusbooneysiin leh oo ka socda dawladda.
Waxaad u baahan doontaa qiyaasta mitirka soodhiga ee 5 ee meelaha saqafka ah ee kuleyliyahaaga qoraxda.
Sidee loo helaa qoraxda tamarta korontada
1. Kala hadal annaga
La-taliyeyaashayada ayaa kaa caawin doona inaad ogaato nooca iyo baaxada albaabbada qoraxda iyo sharaxaad ka bixi waxa aad ka filanayso waxqabadka nidaamka
2. Diyaarso booqasho
U samee booqasho mid ka mid ah khabiiradayada si aan kuu siino qiimeyn iyo qiyaas.
3. Samee taariikh
Dhammaystirso taariikhda rakibidda iyo buuggaaga.
Maxay u dooranaysaa Tamarta Tamarta ee baahiyahaaga qoraxda?
Kooxdayadu waa khabiiro ku shaqeeya qorraxda iyo waxay ka jawaabi doonaan dhammaan su'aalahaaga.
Qalabka nooca loo yaqaan 'MCS' ayaa haysta shahaadada waxaana keliya oo aan isticmaalnaa qaybaha imtixaanka MCS.
Waanu hubin doonaa inaad haysato dhammaan macluumaadka saxda ah ee lagu dalbado lacagahaaga Fika, damaanad faahfaahsan.
Baro wax badan oo maanta ah